သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေများစွာ ကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်စံ – Shwe Likes
သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေများစွာ ကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်စံ
Shwe | December 14, 2021 | Celebrity | No Comments
ဆွဲဆော င်မှု ရှိတဲ့ ပါးချိုင့်ေ လးနဲ့ မင်း သားချော ကောင်းမြတ် စံကေ တာ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးေ တွကြို က်နှစ်သ က်ကြတဲ့ မင်းသားတစ် လက်ပါပဲ။ MRTV-4 မင်းသား တစ်ယောက် အဖြစ် လူသိများအော င်မြင် လာခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်စံဟာ
ဇာတ်လမ်းေ ကာင်းများစွာကို ရိုက်ကူး ခဲ့ပြီး အခုဒုတိ ယအကြိမ်ထုတ် လွှင့်ပြသနေတဲ့ “ချစ်ခြင်းတ ရားတို့ရှိရာမြေ” ဇာတ်ကားမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားေ ပးမှုကို အများအပြားရရှိပိုင်ဆို င်နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ဒီဇင် ဘာလ (၁၃) ရက်ေ န့ကတော့ ပရိသတ်ြ ကီးချစ်တဲ့ မင်းသားကော င်းမြတ်စံရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမြတ်စံ က သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အနယ် နယ်အရပ်ရပ်က ချစ်ပရိသ တ်တွေပေးပို့တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆော င်တွေများစွာကို ရရှိခဲ့ပြီး
ကောင်းမြတ်စံက လည်း သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို “တစ်ဦးတစ်ယောက် ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ …. 🥰 အခုလိုချစ်ပေးေ နတာကိုပဲ အတိုင်းမသိဝ မ်းသာမိပါတယ်ဗျာ 😢” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ကောင်းမြတ် စံကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ ချစ်ပရိသတ်ေ တွဆီက တန်ဖိုးမြ ဖတ်နိုင်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေများစွာကို ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ကောင်းမြတ်စံတ စ်ယောက် မွေးနေ့ကစ အခုလိုပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထာဝရရရှိပိုင် ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတော င်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Source: Kaung Myat San ‘s fb
ဆြဲေဆာ င္မႈ ရွိတဲ့ ပါးခ်ိဳင့္ေ လးနဲ႔ မင္း သားေခ်ာ ေကာင္းျမတ္ စံေက တာ့ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေ တြႀကိဳ က္ႏွစ္သ က္ၾကတဲ့ မင္းသားတစ္ လက္ပါပဲ။ MRTV-4 မင္းသား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ လူသိမ်ားေအာ င္ျမင္ လာခဲ့တဲ့ ေကာင္းျမတ္စံဟာ
ဇာတ္လမ္းေ ကာင္းမ်ားစြာကို ရိုက္ကူး ခဲ့ၿပီး အခုဒုတိ ယအႀကိမ္ထုတ္ လႊင့္ျပသေနတဲ့ “ခ်စ္ျခင္းတ ရားတို႔ရွိရာေျမ” ဇာတ္ကားမွာလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေ ပးမႈကို အမ်ားအျပားရရွိပိုင္ဆို င္ေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
မေန႔က ဒီဇင္ ဘာလ (၁၃) ရက္ေ န႔ကေတာ့ ပရိသတ္ျ ကီးခ်စ္တဲ့ မင္းသားေကာ င္းျမတ္စံရဲ့ ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းျမတ္စံ က သူ႔ရဲ့ေမြးေန႔မွာ အနယ္ နယ္အရပ္ရပ္က ခ်စ္ပရိသ တ္ေတြေပးပို႔တဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာ င္ေတြမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ၿပီး
ေကာင္းျမတ္စံက လည္း သူ႔ရဲ့ပရိသတ္ေတြကို “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီတိုင္းကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ …. 🥰 အခုလိုခ်စ္ေပးေ နတာကိုပဲ အတိုင္းမသိဝ မ္းသာမိပါတယ္ဗ်ာ 😢” ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။
ေကာင္းျမတ္ စံကေတာ့ သူ႔ရဲ့ေမြးေန႔မွာ ခ်စ္ပရိသတ္ေ တြဆီက တန္ဖိုးၿမ ဖတ္နိုင္တဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေတြမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ေကာင္းျမတ္စံတ စ္ေယာက္ ေမြးေန႔ကစ အခုလိုပဲ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ထာဝရရရွိပိုင္ ဆိုင္နိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာ င္းေပးလိုက္ပါတယ္။ Source: Kaung Myat San ‘s fb
စုံတွဲပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ ပြန်လည် အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပီဆိုတဲ့ Key နဲ့ Sophia Everest တို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်
မကြာခင် အနုပညာ အလုပ်တွေပြန်လုပ်တော့မယ့် သူ့ကို ဝေဖန်နေတဲ့ ပရိသတ် တစ်ယောက်အား ထိထိမိမိပြောချလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ရဲလေး
အသက် ၄၀ ကျော် အရွယ်ရောက်မှ ဘဝတလျှောက်မှာ မကြုံဖူးတာတွေ မဖြစ်ဖူးတာေ တွဖြစ်ေ နတဲ့ အဖြစ်အ ပျက်တခုကို ပြောပြလာတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
သားနှစ်ယောက်မေမေ ဖြစ်ေ နပေမယ့်လည်း အပျိုလေး တစ်ယောက်လို ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လ စ်ပြီးလုံးဝအလှမပျ က်သေးေြ ကာင်းကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့သက်သေပြ လိုက်တဲ့ မိုးယုစံ
ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ရှုတင်အထိ အအေးလှည်းကြီး Surprise လက်ဆောင် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မေချစ်သွေး
၆၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ သူ့အတွက်ကို မဆုတောင်းဘဲ အကျဉ်းထောင် ထဲရောက်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဦးဇာဂနာ